शत्रुघ्न सिन्हाकी पुरानो प्रेमिका रीना रोय जस्तै देखिन्छिन् सोनाक्षी सिन्हा, के छ भित्रि बास्तबिकता ? – Sunaulo Nepal TV
शत्रुघ्न सिन्हाकी पुरानो प्रेमिका रीना रोय जस्तै देखिन्छिन् सोनाक्षी सिन्हा, के छ भित्रि बास्तबिकता ?
काठमाडौं । शत्रुघ्न सिन्हा बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन्। उनकी छोरी सोनाक्षी पनि अब फिल्ममा छिन्, सोनाक्षीले फिल्मी दुनियाँलाई पनि करियरको रुपमा रोजेकी छिन्। तर आजको पोस्टमा शत्रुघ्नकी पूर्व प्रेमिका रीना राय र सोनाक्षीले तपाईंलाई यस्तो सत्यको बारेमा जानकारी दिनेछौ।
रीना राय ८० को दशक तिर उत्कृष्ट अभिनेत्री थिइन्। आफ्नो फिल्मी करियर मा, उनले शत्रुघ्न सिन्हा संग जम्मा १६ फिल्ममा काम गरेका छन्। रीना रोयले फिल्मी दुनियाँमा मुख्य पात्र देखि आमा को भूमिका सम्म सबै पात्रहरु लाई राम्रो संग निभाएकी छिन्। तर धेरै मानिसहरु भन्छन् कि अभिनेता शत्रुघ्नकी छोरी सोनाक्षी को अनुहार त्यो युग को प्रसिद्ध अभिनेत्री रीना राय संग धेरै मिल्दोजुल्दो छ।
यो पनि भनिन्छ कि सोनाक्षी शत्रुघ्न र रीनाकी छोरी होइनन्? भनिन्छ किनभने ८० को दशकमा शत्रुघ्न र रीना रायको अफेयरको खबर धेरै चर्चामा थियो। उनीहरु धेरै फिल्महरुमा सँगै काम गरेका छन्। फिल्म ‘कालीचरण’ को समयमा, शत्रु र रीना को प्रेम फस्टाएको थियो। यस दौरान, मानिसहरु लाई उनीहरुको जोडी यति मन पर्यो कि हिन्दी सिनेमा को हरेक निर्देशक यी दुई संग काम गर्न चाहन्थे। तर, शत्रुघ्न त्यतिबेला विवाहित थिए। र यस सम्बन्ध को कारण, उनले आफ्नो वैवाहिक जीवन मा धेरै समस्याहरुको सामना गर्नु परेको थियो।
जसका लागि रीनाले दुश्मनलाई धेरै पटक आफ्नी पत्नी पूनमलाई तलाक दिन आग्रह गरिन्, यद्यपि दुश्मन आफ्नी पत्नीलाई छोड्न चाहँदैनथे र आज पनि दुबै सँगै छन्। पछि रीनाले यो कुरा बुझिन् र त्यसपछि दुबै अलग भए। पछि रीना रोय एक पाकिस्तानी क्रिकेटर संग बिहे गरिन्, यद्यपि यो विवाह लामो समय सम्म टिक्न सकेन र दुबै को पनि १९९० मा सम्बन्ध विच्छेद भयो। यो कारण हो कि मानिसहरु भन्छन् कि सोनाक्षी रीना राय को छोरी हो।
यद्यपि रीनाले यस कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरिन् र उनी यो पनि भन्छिन् कि ‘सोनाक्षी बिल्कुल आफ्नी आमा पूनम जस्तै देखिन्छिन्’, र दुश्मनकी पत्नी पूनमले पनि यो कुरालाई बकवास गरिन्। शत्रुघ्न सिन्हाले एक अन्तर्वार्तामा खुलाए कि उनको विवाह पछि रीना राय संग अफेयर थियो। उनले यो पनि भने कि उनीसँग उनको सम्बन्ध व्यक्तिगत थियो।
Previous अक्षय कुमार, सलमान खान सहित ३८ कलाकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता
Next अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली युवकसंग बिवाह गर्दै